I-Om Home Standard Bungalow 2 - I-Airbnb
I-Om Home Standard Bungalow 2
Igumbi lakho lokulala e indlu enevaranda sinombuki zindwendwe onguManon
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uManon iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
SiseOtres Village kumgama wokuba ungahamba ngeenyawo ukuya elunxwemeni kwaye sihamba imizuzu emibini ukuya kwiMarike yeOtres. Izindlu zethu ezimbini ezinevaranda zamaplanga ezilungisiweyo ezinegumbi lokuhlambela labucala nophahla olunendawo yokuhlala etofotofo kwindawo enechibi nezinto eziluhlaza. Indlu nganye enevaranda inetreyini enezitulo ezimbini, igumbi lokuhlambela lale mihla, amanzi ashushu asebenza nge-solar, ibhedi enkulu kunye nefeni ngaphakathi. I-WIFI yasimahla iyafumaneka kuyo yonke le ndawo.
Izindlu ezinevaranda zale mihla zibekwe ecaleni kwee-bungalows ezimbini zamaplanga eziqeshisayo kunye nendlu yabasebenzi. Kukho indawo yokwamkela iindwendwe/indawo yokuhlala phantsi kophahla ukuze uphole kamnandi, apho kukho iziselo kwaye iindwendwe zinokufumana ikomityi yekofu yasimahla kusasa namanzi okusela asimahla. Indlu nganye enevaranda inendawo yayo yokungena kwiveranda, sinesepha yezandla, ilineni yebhedi kunye neetawuli.
4.62 · Izimvo eziyi-26
Ihlala ikhula kwaye idlamkile iOtres Village ibonelela ngoluhlu olubanzi lwamathuba okonwabisa kubahambi: ukusuka ekuboneni indawo, ukuphumla elunxwemeni ukuya ukonwabela ukutya kwasekhaya kunye nesimbo sasentshona. Kude ngokwaneleyo ukusuka kwisixeko saseSihanoukville ukubaleka ukuphithizela kunye nokuphithizela kodwa uvale ngokwaneleyo ukuba unqwenela ukuya kuthenga kwintengiso yayo ngexesha lasemini (i-19 min drive). Ezinye iilwandle ezaziwa kakhulu i-Ochheutal kunye ne-Serendipity malunga ne-15 min drive away.
Umbuki zindwendwe ngu- Manon
Ukusuka kwindawo yolwamkelo asinikezeli kuphela iinkonzo ezinxulumene nendawo yokuhlala, unokuza kuthi ukuba ufuna amatikiti ezothutho, irenti yemoto, ukhenketho okanye naluphi na olunye ulwazi malunga nommandla. Siyavuya ukwabelana ngolwazi lwethu malunga ne-Otres kwaye senze amava akho agudileyo kwaye abemnandi njengoko sinako. Siya kuhlala sifumana ixesha lokwazi iindwendwe zethu ukuba zizimisele.
Ukusuka kwindawo yolwamkelo asinikezeli kuphela iinkonzo ezinxulumene nendawo yokuhlala, unokuza kuthi ukuba ufuna amatikiti ezothutho, irenti yemoto, ukhenketho okanye naluphi na…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Krong Preah Sihanouk